Habaka Hita Maso Ho Fanairana Ny Fandraisan’anjara Dizitaly Misimisy Kokoa Avy Amin’olon-tsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2012 9:17 GMT
Mirotsaha manatevin-daharana ny New Tactics, Rising Voices, SMEX, ary ireo mpikirakira hafa anatinà resadresaka ao amin'ny aterineto momba ireo “Habaka Hita Maso Ho Fanairana Ny Fandraisan'anjara Dizitaly Misimisy Kokoa Avy Amin'olon-tsotra” hatao ny 8-14 Aogositra 2012.
Manerana izao tontolo izao, nipoitra ireo toerana hita maso sy vaovao izay miasa ho toy ny mpanaitra ny fandraisan'anjaran'ireo mpampiasa teknolojia dizitaly ho bebe kokoa. Miverina mandinika ny anjara asany mahazatra ireo trano famakiam-bokim-pirenena, ary maro amin'izao fotoana izao no manome fahafahana miditra aterineto ho an'ireo mpampiasa azy ho fanomezana azy ireo fahafahana hivondrona manoloana ireo olana atrehan'ny firenena izay ahafahan'izy ireo mitera-bokatra, fa tsy ho mpanjifa vaovao fotsiny ihany. Mandeha lavidavitra kokoa amin'ny fanomezana fahafahana hikitika solosaina ho an'ireo vondrom-piarahamonina ireo “Telecenters”, manome atrikasa hanofanana ny olon-tsotra mikasika ny fampiasàna ny teknolojia dizitaly raitra araka ny tokony ho izy hampiroboroboana ny fiovàna. Ny Hacklabs dia manome toerana hita maso hahafahan'ireo mafana fo sy mpampiasa teknolojia mivondrona hikarohana vahaolana amin'ireo olana ao amin'ny firenena. Ohatra vitsy fotsiny ireto momba ny fampiasàna ny habaka hita maso handrisihana ny fandraisan'anjara dizitaly misimisy kokoa avy amin'olon-tsotra!
Beth Kanter sy Lena, lehiben'ny mpampiofana avy any Yemen, mirotsaka ao amin'ny atrikasa mafonja E-Mediat Train-the-Trainers any Beirut ampiantranoan'ny SMEX Beirut. Nampiasaina eo ambanin'ny Creative Commons license.
Na dia nitondra làlana vaovao ho an'ny vahoaka hiaraha-miasa ao anatin'ny tontolo virtoaly aza ny Aterineto, mikaroka angovo hafa famenony ny vahoaka ankoatry ny fiaraha-miasa mifanatri-tava. Manana finiavana hahita ireo vondrom-piarahamonina hihetsiketsika kokoa amin'ny fampiasàna ireo fitaovana dizitaly ireo ireo mpanentana sy mpampianatra an'ireo mpampiasa an'ireo habaka ireo.
Làlana misokatra amin'ny fifanakalozana ohatra mitondra zava-baovao amin'ny fampiasàna ireo habaka hita maso ireo amin'ny maha-fanairana azy ho amin'ny fandraisan'anjara misimisy kokoa avy amin'olon-tsotra. Hotrandrahantsika ny fomba nahitàn'ireo habaka ireo, sy ny olona ao ambadik'ireo habaka ireo, fomba hivondronana hamahana ireo olana ao amin'ny firenena, ary hanomezana ireo olom-pirenena feo tsara kokoa aty anaty aterineto. ‘Ndao hiaraka aminay ny 8 Aogositra!
1 andro izaySoeda